Xiddig ka tirsan Barcelona oo dhaleeceeyay qaab ciyaareedka tababare Valverde, kaddib markii uu la bar-bardhigay… – Gool FM
(Spain) 09 Juunyo 2019. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Arthur Melo ayaa ka baxay aamusnaanta, kaddib markii uu dhaleeceeyay naqshad xumida tababare Ernesto Valverde, iyo qorsho ciyaareedka ay ku tiirsan tahay kooxda reer Catalonia.
Xiddiga heerka caalami ah dalka Brazil ee Arthur Melo ayaa ka hadlay shaqada kala dhexeyso macalinka kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde, wuxuuna isbarbardhigay wada shaqeynta kala dhexeysa tababaraha xulka Seleção ee Tite, kulamada uu kala qeyb galo ciyaartoyda Samba.
Hadaba Arthur Melo ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay farqiga u dhexeeya marka uu u ciyaarayo kooxda Barcelona iyo xulkiisa qaranka Brazil.
“Waxa ugu muhiimsan ayaa ah, Barcelona waxaan ku lug leeyahay dhismaha ciyaarta marka laga soo bilaabo qeybta dambe”.
“Tite wuxuu i siiyaa xuriyad dheeraad ah oo kubadda aan kaga qaabili karo inta u dhexeysa labada dhinac, isla markaana aan ku dhisi karo ciyaarta, kaalin weyna aan kaga qeyb qaadan karo dhanka weerarka, waxaan u maleynayaa inuu jiro farqi aad u weyn”.
Hadaladan ayey u muuqataa in si dadban uu xiddiga reer Brazil ugu dhaleeceenayo qorsho ciyaareedka Ernesto Valverde ee kooxda Barcelona, kaasoo si xoogan ugu tiirsan qaab difaaceed iyo weeraro gaadmo ah, iyadoo uusan heysanin Arthur Melo xuriyad ku filan si uu si raaxo leh ugu ciyaaro.
Arthur Melo oo haatan 22 jir ah ayaa ku sugan Brazil si uu ugu diyaar garoobo tartanka Copa America, kaasoo lagu qaban doono dalka Brazil laga bilaabo June 14 ilaa iyo July 7.